काभ्रेको देवीथानडाँडामा विमान दुर्घटनाको नाटक, प्रहरी भन्छ- ‘१० जनाको ज्यान गयो’ — Sanchar Kendra
काभ्रेको देवीथानडाँडामा विमान दुर्घटनाको नाटक, प्रहरी भन्छ- ‘१० जनाको ज्यान गयो’
काठमाडौं । बुधबार काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका देवीथानस्थान डाँडामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका उद्दारकर्ताहरु दौडधुपमा थिए ।
घटनास्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत पनि थिए । उनले दुर्घटनाबारे संक्षिप्त जारी दिँदै भने ‘तुम्लिङटारबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ट्वीनअटर ९ एन इको १०० इको विमान दुर्घटना भएको छ । जसमा १४ जना यात्रु र तीनजना चालकदल गरी १७ जना थिए । त्यसमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ । ७ जना घाइते भएका छन् । एकजना गम्भीर घाइतेलाई हेलीबाट काठमाडौं पठाइएको छ । ६ जनालाई धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ ।’
तर, यो सत्य घटनामा आधारित थिएन । दुर्घटनापछिको उद्दारको पूर्वअभ्यास थियो । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले हरेक दुई वर्षमा यस्तो पूर्वाभ्यास गर्दै आएको छ ।
उता पोखरा विमानस्थलमा एक पाइलट र एक यात्रु चढ्न मिल्ने (हेलिकप्टर) जाइरोकप्टर अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको छ। मंगलबार दुर्घटना भएको उक्त जाइरोकप्टरमा चालक फ्रान्सका ४५ वर्षीय एरिक र गैंडाकोट नगरपालिकाका नवलपरासीका यात्रु ३५ वर्षीय अनिश भट्टचन सवार थिए।
दुर्घटनाबाट ठूलो क्षति भने नभएको पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी काशीनाथ पौडेलले जानकारी दिए। ‘यात्रुको हातमा सानो चोट लागेको छ। चालकलाई केही पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल उद्धार भएकाले ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन।’
दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेट जाँदा उडान भरेको जाइरोकप्टर २ बजेर १५ मिनेटमा विमानस्थलको पूर्वी धावनमार्गबाट अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको विमानस्थलका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए। दुइटै पंखामा खराबी भएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कास्कीका डिएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए।
यसअघि पोखरा विमानस्थलबाट ३ ठूला अल्ट्रालाइट भएका थिए। उक्त दुर्घटनाबाट ३ विदेशी र २ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। ती सबै दुर्घटना एभिया क्लबले उडाउँदै आएको अल्ट्रालाइट थियो।
यसअघि आकासमा हवाइजहाज उडाइरहेका बेला विमानभित्रै चालक निदाएको समाचार भाइरल बनेको थियो । हवाइजहाजको ककपिटभित्रै पाइलट निदाएको विदेशी समाचार त हामीले पढ्दै आएका हौं, तर निदाएको खबर भने खासै सुनिएको थिएँन ।
खासमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट नागराज शंकरमूर्ति एयरबस ३२० न्यारोबडी जहाजभित्रनिदाएका हुन् ।काठमाडौंबाट दुबई उडेका बेला नागराज मस्त निदाइदिए । र चालक दलका सदस्यसहित १६५ जनाको ज्यानको जिम्मा को–पाइलटकाे भरमा छाडिदिए ।नेपाल एयरलाइन्समा आउनुअघि हिमालयन एयरलाइन्समा कार्यरत थिए नागराज ।
हिमालयन एयरलाइन्समा पनि उनी त्यस्तै गर्दथे । त्यसैले सुरक्षामा संवेदनशील नदेखिएको भन्दै हिमालयन एयरलाइन्सले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उनी नेपाल एयरलाइन्समा आएका हुन् । आफूलाई निष्काशन गरेकोमा हिमालय एयरलाइन्सविरुद्ध उनले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । नागराज भारतीय नागरिक हुन् ।
हालै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ पाइलट विजय लामालाई निगम व्यवस्थापन पक्षले प्रवक्ताबाट हटाएको थियो । तर, ककपिटभित्रै निदाइदिने नागराजलाई भने केही नगरेको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरु रुष्ट छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मुख्य पाइलट हुन् नागराज, उनी ककपिटभित्रै चुरोट पिउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, हरेक उडानमा निदाइदिन्छन् । यस्तो गम्भीर लापरवाही हुँदा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्स चुप लागेर बस्नु आश्चर्यजनक छ ।’
कस्तो अवस्थामा पाइलट निदाउन पाउँछन् ?
कतिपय देशमा पाइलटहरुलाई ककपिटमा सुत्नका लागि अनुमति दिइएको हुन्छ । सामान्यतः लामो उडानमा त्यस्तो गर्ने गरिन्छ, जहाँ ३ या ४ जना पाइलटहरु हुन्छन् । अमेरिकाको सन्दर्भमा कम्तिमा दुईजना पाइलट जागेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यो स्थितिमा अन्य एक वा दुईजना पाइलट सुत्न सक्छन् ।
रातभरि चल्ने प्लेनमा कम्तिमा एकजना पाइलट जागा रहेको अवस्थामा अर्को सुत्न सक्छ । जस्तो कि पिसाव लाग्यो भने उसले अर्को पाइलटलाई छाडेर ट्वाइलेट जान सक्छ । यसबाट अनुमान गरिन्छ कि प्लेनमा एकभन्दा बढी पाइलट जागा हुनैपर्छ ।
आजभन्दा ५ महिना अगाडि गार्जियनले लेखेको एक समाचार अनुसार अष्ट्रेलियामा डेभेनपोर्ट तस्मानियादेखि बास स्ट्रेटको किङ आइसल्याण्डका लागि उडेको जहाजका पाइलट निदाउँदा प्लेन गन्तव्यभन्दा ४६ किलोमिटर टाढा पुगेको थियो ।
असार ९ गतेदेखि दुबई-काठमाडौँ उडान सुरु हुँदै, कति छ टिकट मूल्य ?
थुनिएको तामाकोशी नदीलाई चिनले यसरी खोलिदिए, के भन्छन दोलखाका डिएसपी ?